Fahadisoana amin'ny tetibola 5 hialana | Martech Zone
Fahadisoana amin'ny tetibola 5 hialana
Alatsinainy, Aogositra 14, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Iray amin'ireo infografika nozaraina indrindra nataonay ny niresaka taminay Tetibola amin'ny varotra SaaS ary tena ny isan-jaton'ny vola miditra amin'ny orinasa sasantsasany no nandany hitazomana sy hahazoana ny anjaran'ny tsena. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny teti-bola amin'ny marketing amin'ny isan-jato isan-jato amin'ny fidiram-bola, dia manome ny ekipa mpivarotra anao hampitombo ny fangatahana arakaraka ny takian'ny ekipa mpivarotra anao. Ny teti-bola madinidinika dia miteraka valiny fisaka… raha tsy mahita tahiry any anaty mifangaro ianao.
Ity infographic avy amin'ny MDG Advertising, Fahadisoana momba ny teti-bola 5 lehibe tokony hialana, manazava faritra dimy izay mahatonga ny lesoka amin'ny fitsarana amin'ny fandaniam-bola tsy mahomby ary koa ny fomba hanaovana laharam-pahamehana ny fotoananao, ny herinao ary ny teti-bolanao amin'ny fampiharana ny paikadim-barotra.
Ny lesoka amin'ny teti-bola amin'ny marketing:
Manomboka amin'ny angona ratsy - Mino ny orinasa fa ny 32% amin'ny angon-drakitra dia tsy marina, salanisa. Ity angona tsy azo itokisana ity, izay manomboka amin'ny tsy fahatomombanana Analytics tabilao mankany amin'ireo banga lehibe ao amin'ny tahiry mpanjifa, mampifandray mivantana amin'ny safidin'ny teti-bola ratsy.
Tsy mahomby amin'ny fandrindrana amin'ny varotra - 50% ny mpivarotra dia tsy afa-po amin'ny ezaky ny varotra ataon'izy ireo. Ny teti-bola marketing rehetra dia tokony hamboarina miaraka amin'ireo sampana hafa, indrindra ny varotra. Ankoatr'izay, ny fandaniam-bola tsirairay dia tokony hifandray mivantana amin'ny valin'ny asa andrasana.
Fampiasam-bola ambany amin'ny soavaly voaporofo - 52% amin'ireo mpivarotra no milaza fa ny mailaka dia iray amin'ireo fantsona mahomby indrindra ampiasain'izy ireo saingy matetika ny mpivarotra dia manosika ny tetibola amin'ny paikady hafa na dia eo aza ny fahombiazan'ny mailaka. Zava-dehibe ny fanohizana fampitomboana ny fampiasam-bola amin'izay efa mandeha.
Manambany ny hafainganan'ny fiovana - Ao amin'ny 2017, ny nomerika dia vinavinaina hanombanana 38% amin'ny fandaniana doka amerikanina manontolo, ary misy teknolojia vaovao marobe mipoitra izay mahazaka ny fiakarana haingana nomen'ny nomerika tamin'ny taona ho avy.
Tombana kely loatra, tsy fahita firy - 70% amin'ireo orinasa tsy mitsapa fanentanana amin'ny marketing matetika amin'ny mpanjifa. Ireo mpivarotra dia mila manandrana haingana sy mihodina eo anelanelan'ny mpampita sy ny fantsona ary ny paikady amin'ny fampiasana an paikady marketing mailaka.
Tags: tahirin-kevitra ratsyteti-bolafanovanaDatamailaka Marketingfanombanana-barotratetibola marketingvaovaoFanamafisana ny varotrafitiliana
Ny fampifanarahana sy ny famaliana ny valiny dia mitondra valiny amin'ny marketing amin'ny atiny
Inona no atao hoe Rafitra fitantanana fifanarahana? Manao ahoana ny lazany?